Na-echeta Ndịàmà Jehova Nọ n’Ụlọ Mkpọrọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Zulu
NỌVEMBA 18, 2013
OKWU IKPE GBASARA NDỊÀMÀ JEHOVA NIILE
Nkebi nke 18 nke Ihe Mba Dị Iche Iche Kwekọrịtara na Ọ Bụ Ihe Ruuru Mmadụ kwuru na “mmadụ iche ihe masịrị ya, ịjụ ihe akọnuche ya na-anabataghị, na ikpe okpukpe masịrị ya” so n’ihe ndị bụ́ isi ruuru mmadụ. * N’obodo ụfọdụ, Ndịàmà Jehova sị ka ha mee ihe ndị a ruuru ha, a tụọ ha mkpọrọ, na-echikwa ha ọnụ n’ala. Ọtụtụ n’ime ndị a a na-atụ mkpọrọ bụ ụmụ okorobịa jụrụ ịrụ ọrụ agha n’ihi na akọnuche ha anabataghị ya. Ndị ọzọ abụrụ naanị maka na ha na-ekpe okpukpe ha.
Ma, ihe a niile a na-eme Ndịàmà Jehova anaghị eme ka ha gbanwee obi ha ma ọ bụ kwụsị ikpe okpukpe ha. Kama, ọ bụ ndị ọchịchị na-eme ha ya ka ọ na-ebutere aha ọjọọ n’ihi na ha ekweghị na mmadụ nweere onwe ya ịjụ ịrụ ọrụ agha n’ihi akọnuche ya. N’okpuru ebe a, e dere aha obodo ebe a tụrụ Ndịàmà Jehova mkpọrọ, nakwa Ndịàmà Jehova ole ha tụrụ mkpọrọ.
NDỊ NỌ N’ỤLỌ MKPỌRỌ
Ole Ha Niile Dị
Ihe a bụ mmadụ ole nọ n’ụlọ mkpọrọ na Nọvemba 12, 2013
Akụkọ kacha ọhụrụ anyị natara gosiri na Ndịàmà Jehova iri ise na abụọ, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị, nọ n’ụlọ mkpọrọ ugbu a n’Eritria. A na-echikwa ha ọnụ n’ala ebe ahụ. N’agbanyeghị na e kpebeghị ha ikpe, a ka jichiri ha maka na akọnuche ha ekweghị ha rụọ ọrụ agha, maka na ha na-ekpe okpukpe ha, ma ọ bụkwanụ maka ihe ọzọ a na-ekweghị agwa ọhaneze. Ndịàmà Jehova atọ aha ha bụ Paulos Eyassu, Isaac Mogos, na Negede Teklemariam, anọọla ihe fọrọ ntakịrị ka ọ bụrụ afọ iri abụọ n’ụlọ mkpọrọ maka na akọnuche ha ekweghị ha rụọ ọrụ agha. A tụrụ ha mkpọrọ n’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa Septemba afọ 1994. Ndịàmà Jehova abụọ gaferela afọ iri isii anwụọkwala n’ụlọ mkpọrọ. Aha ha bụ Misghina Gebretinsae na Yohannes Haile. Kemgbe mba Eritria nweere onwe ya n’afọ 1993, ndị ọchịchị ya akwụsịbeghị ịtụ Ndịàmà Jehova mkpọrọ, imekpọ ha ọnụ, na iyi ha egwu.
Ka ọ dị ugbu a, narị ụmụ okorobịa ise na iri itoolu na itoolu bụ́ Ndịàmà Jehova nọ mkpọrọ otu afọ na ọnwa isii maka na akọnuche ha ekweghị ha rụọ ọrụ agha. Malite n’oge a lụrụ agha Koria ruo ugbu a, mba Saụt Koria akwụsịbeghị ịma ụmụ okorobịa Ndịàmà Jehova ikpe maka na ha jụrụ ịrụ ọrụ agha. Ha ewepụtabeghịkwa ọrụ ọzọ a ga na-enye ndị na-achọghị ịrụ ọrụ agha. A gụkọta Ndịàmà Jehova niile ha tụrụ mkpọrọ malite n’oge a lụrụ agha Koria ruo ugbu a, ha dị puku mmadụ iri na asaa, na narị ise na iri anọ na itoolu. A gbakọtakwa oge ha ji nọọ n’ụlọ mkpọrọ, ọ dị puku afọ iri atọ na anọ na otu narị afọ. Ihe a gosiri na mba Saụt Koria jụrụ ime ihe ha na mba ndị ọzọ kwekọrịtara, jụkwa ikweta na mmadụ nweere onwe ya ịjụ ịrụ ọrụ agha ma ọ bụrụ na akọnuche ya anabataghị ya. Ị chọọ ịmatakwu gbasara ihe a a kọrọ ebe a gụọ isiokwu bụ́ Ọtụtụ Mba Akatọọla Ikpe Na-ezighị Ezi A Na-ekpe na Saụt Koria.
Gọọmenti Nagono-Karabak tụrụ otu nwata nwoke Onyeàmà Jehova dị afọ iri abụọ mkpọrọ maka na o kweghị arụ ọrụ agha n’ihi akọnuche ya. O nweghịkwanụ ọrụ ọzọ gọọmenti a wepụtara maka ndị akọnuche ha na-ekweghị ha rụọ ọrụ agha. N’abalị iri atọ n’ọnwa Disemba afọ 2011, a tụrụ ya mkpọrọ afọ abụọ na ọnwa isii. N’abalị iri abụọ na itoolu n’ọnwa Jenụwarị afọ 2013, e kweghị anabata arịrịọ ọ rịọrọ ka a hapụ ya. Ndị na-ahụ maka ụlọ mkpọrọ ọ nọ na ya ekweghịkwa anabata arịrịọ ọ rịọrọ ka a hapụ ya ka ọ gaa gwọọ ọrịa na-arịa ya.
Ndị ọchịchị Sịngapọ tiri iwu na onye ọ bụla ha kpọrọ ga-abịarịrị rụọ ọrụ agha, ha ekwetaghịkwa na mmadụ nweere onwe ya ịjụ ịrụ ọrụ agha ma ọ bụrụ na akọnuche ya anabataghị ya. Ma, ụmụ okorobịa Ndịàmà Jehova iri na asatọ kpebisiri ike na ha agaghị eme ihe akọnuche ha na-anabataghị, nke Baịbụl na-akwadoghịkwa. N’ihi ya, a tụrụ onye nke ọ bụla n’ime ha mkpọrọ afọ atọ na ọnwa atọ n’ebe a na-atụ ndị agha mkpọrọ. Ma, e nwere Onyeàmà Jehova a hapụrụ n’ọnwa Ọgọst afọ 2013 mgbe ọ nọzuru otu afọ n’ụlọ mkpọrọ maka na o kweghị arụ ọrụ agha.
E nwere ụmụ nwoke itoolu bụ́ Ndịàmà Jehova nọ n’ụlọ mkpọrọ ugbu a na Tọkmenestan. A tụrụ asatọ n’ime ha mkpọrọ maka na ha ekweghị arụ ọrụ agha n’ihi akọnuche ha, tụọ otu nke ọzọ mkpọrọ maka ebubo ụgha e boro ya. N’ime mmadụ itoolu a, o nwere ndị nke ga-anọ otu afọ n’ụlọ mkpọrọ, nwee ndị nke ga-anọfe ya, nweekwa ndị nke ga-anọru afọ abụọ. Ọtụtụ mgbe, ndị na-arụ n’ụlọ mkpọrọ na ndị agha na-akụ ha ọ̀ dị ndụ ọnwụ ka mma. Oge ụfọdụ, ọ na-abụ ha nọchaa n’ụlọ mkpọrọ pụta, a maakwa ha ikpe na ha adaala iwu ahụ ha daburu ọzọ. A na-atụbazi ha n’ụlọ mkpọrọ ka nke mbụ ahụ njọ.
^ para. 2 Gụọ ihe e dere n’Ihe Òtù Mba Ụwa Kwuru na Ọ Bụ Ihe Ruuru Mmadụ Ọ Bụla, Nkebi nke 9.